XOG: Barlamaanka Puntland oo berri u balansan kulan xasaasi ah & 2 arrimood oo horyaal.
July 21, 2021 Xuseen 0
Puntlandtimes (Garoowe)-Xildhibaanada golaha wakiilada Puntland ayaa maalinimada berri ah yeelan doona fadhigii 16aad ee kal-fadhiga 48aad ee barlamaanka, kadib soo laabashada fasaxa maalmaha ciidda Carafo oo ay kujireen muddo 5 cisho ah.
Fadhiga berri ayaa waxaa barlamaanka horyaal Ajandayaal dhowr ah oo uu horay u sii shaaciyey guddoomiyaha barlamaanka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo ka hadlayey xiritaanka fadhigii ugu dambeeyey ee goluhu yeeshay.
Arrimaha horyaal waxaa ugu muhiimsan magacaabista 9 xubnood oo noqon doona guddiga heer barlamaan ee guddiyada hirgelinta doorashada Soomaliya kala shaqayn doona doorashada xildhibaanda aqalka sare ee barlamaanka Soomaaliya.
Waxaa kale oo lafilayaa in kulankaan looga hadlayo Anshax marinta xildhibaan Kuluc oo qaar kamid ah barlamaanku dhowaan soo jeediyeen in guddiga anshaxu soo qiimeeyaan warbixino iyo hadalo uu dhowaan jeediyey xilli lagu eedeeyey inuusan soo xaadirin fadhiyadii ugu dambeeyey ee barlamaanka.
Kuluc oo siweyn u dhaliilay waxka bedelka xeer hoosaadka barlamaanka Puntland ayaa waxa arrintiisa warbixin ka soo saaray golaha oo sheegay inuu ka maqnaa fadhiyadii ugu dambeeyey ee barlamaanku kaga hadlayeen arrimaha xeer hoosaadka iyo wax ka bedelkiisa sida lagu sheegya warka barlamaanka.